Tuesday, 8 Dec, 2015 2:40 PM
भारतको नाकाबन्दीले जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । उद्योग, कलकारखाना देखि सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव छ । नाकाबन्दीले कलाकारलाई समेत निकै अस्तव्यस्त बनाएको छ । नाकाबन्दी र यसको प्रभावका विषयमा मोडल तिर्सना बुढाथोकीसँग न्यूजसेवा डट कमले गरेको कुराकानी ।
नाकाबन्दीको प्रभाव कस्तो छ ?
भनि साध्य नै छैन । नाकाबन्दीले म त पागल भइसकेकी छु ।
तपाईको घरमा ग्यास छ कि छैन ?
ग्यास कहाँ हुनु नि । आगोमा पकाइराखेकी छु । एउटा आधा सिलिण्डर ग्यास लिएकी थिए त्यो पनि सकियो । दशै तिहार प¥र्यो त्यसले पनि असर पु¥यायो । मेरो घरमा भाडामा बस्ने दिदीहरुले पनि छतमै पकाएर खानुहुन्छ । कति दिन त उहाँहरुले खाना नै खानु भएन ।
एउटा ग्यास कति महिना पुग्छ ।
हामीलाई त दुई महिना पुग्छ । हाम्रो सानो परिवार छ । हामी घरमा ममी, हजुरआमा, भाई र म मात्रै हो ।
दाउरा कहाँबाट ल्याउनु भयो ।
घर बनाउँदा बाँकी रहेका दाउरा थिए त्यहीँ प्रयोगमा ल्याएका छौँ । कोइला पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ ।
दाउरामा पकाउन गाह्रो हुँदैन ।
होइन हाम्रो पुरानो परम्परा नै दाउरा हो । हामीले दाउरालाई त्यती असहज मान्नु हुदैन । तर अहिले हामी काठमाडौँमा छौँ । सिमेन्टको घर बनाएका छौँ । सिमेन्टको घरमा दाउरा बाल्दा धुवाँको असर पर्दो रहेछ । मेरो इन्डक्सन चुलो पनि छ तर के गर्नु खाना पकाउने बेलामै वत्ती जान्छ ।
यातायात चाँही ?
के कुरा गर्नु । धेरै जसो त म हिडैर काममा जान थालेका छु । हिजो म अनामनगरबाटै हिडेरै मनुमैजु गए । गाडि चढि साध्य छैन । ट्याक्सी पनि सोधी सक्नु छैन । हामीजस्तो नर्मल लाइफ स्टायल हुनेले ट्याकसी चढ्न पनि सक्दैर्नौ, गाडिमा झुण्डिन पनि सक्दैनौँ ।
साधन के छ ?
सानो सानो स्कुटर त छ । तर नाकाबन्दी पछि थन्काएरै राखिकी छु । लाइनमा बस्नु भन्दा हिड्नै सजिलो लागिराछ ।
नेपालमा किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो ?
यो सबै दलाल नेताहरुको कारण हो । मैलै मोडलिङबाटै नाकाबन्दीको विरोध जनाउने तयारी गरेकी छु । यो नेताहरुको गल्तिबाट भएको हो ।